Banaanbax ka dhan ah Muuse Biixi oo ka dhacay Laascaanood
LAASCAANOOD - Wararka laga helayo magaalada Laascaanood, ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaasi oo maanta ka dhacay dibadbax ballaaran, oo looga soo horjeedo imaanshaha Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ee degmada.
Boqolaal qof oo isagu jira rag, dumar, carruur iyo waayeello oo kamid ah dadka degaanka ayaa isagu soo baxay wadooyinka Laasacaanood, iyagoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Waxay dadka banaanbaxayay wadooyinka ku gubeen taayarro, iyadoo isku dayay inay kahor istaagaan Wafdiga Muuse Biixi inuu soo galo magaalada Laacaanood, balse ciidamada Somaliland ay rasaas ku fureen dibadbaxiyaasha caraysan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay wehliyeen Wasiiro katirsan Xukuumadisa, Saraakiil ciidan iyo xubno kale ayaa maalmahaan booqasho ku maraya deegaanada Soomliland, oo Berbera iyo Burco ay kamid yihiin, waxaana Maanta ay tegeen Laascaanood.
Magaalada Laascaanood ayaa ka dhacayay mudooyinkii dambe dibadbaxyo looga soo horjeedo Somaliland iyo ciidanka halkaasi ka jooga, iyadoo dadka degan ay taageero u muujiyeen Puntland, oo maamul ahaan ay kamid yihiin.
Booqashada Muuse Biixi ee gobolka Sool, gaar ahaan Laascaanood ayaa kusoo beegmaysa xilli ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland isku hor-fadhiyaan Tukaraq, halkaasi oo maamulkaasi dagaal kula wareegay January 2018.
Ciidamda Somnaliland ayaa gaarey goobta, iyadoo dilkan la sheegay inuu la xiriiro...
NISA oo lagu eedeeyay in ay fududeysay weerarkii Xabsiga Dhexe 11.08.2020. 12:00